DEG DEG: Ciidamada Itoopiya Oo Dad Shacab Ah Ku Laayay Magaalada Baardheere Iyo Xiisada Oo Cirka Isku Shareertay – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
DEG DEG: Ciidamada Itoopiya Oo Dad Shacab Ah Ku Laayay Magaalada Baardheere Iyo Xiisada Oo Cirka Isku Shareertay
Xiisad kacsanaan ayaa ka jirta maanta gudaha degmada Baardheere ee gobalka Gedo kadib xiisad ay ka dhalatay ciidamo katirsan Military-ga Itoopiya oo gudaha magaaladaasi kusoo dhaweeyay, Gudoomiye cusub oo Madaxweynaha maamulka Jubbaland dhawaan usoo magacaabay degmadaasi.
Military-ga Itoopiya ayaa gadiidka gaashaaman garoonka diyaaradaha degmadaasi kaga soo galbiyay masuuliyiintaasi cusub, balse waxaa is hor istaag ku sameeyay Xubnahaasi degmada loosoo magacaabay, shacab ka careysan in gudoomiye cusub hada losoo soo magacaabo degmada Baardheere .
Sarkaalkaal katirsan Ciidamada dowladda oo la hadlay Idaacada Simba ayaa sheegay in ciidanka Itoopiya ay si bareer ah u toogteen 4 Qof oo kamid ahaa dadka deegaanka, balse ka biyo diidanaa in gudaha degmadaasi lagu soo dhaweeyo Xubno cusub oo Axmed madoobe usoo magacaabay degmadaasi.
Shacabka ku dhaqan Magaalada Baardheere ee gobalka Gedo ayaa maal mahii ugu danbeeyay dhigayay banaan baxyo ay kaga soo hor Jeedaan in Hogaamiyaha Jubbaland uu yimaado Magaaladaasi.
Dhanka kale wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegay in xiisad kacsanaan ah hada laga dareemayo xaafadaha kala duwan ee degmada, iyo in magaalada gudaheeda lagu arkayo ciidamo Itoopiyaan ah.
Dhageyso:Sarkaal Katirsan Ciidamada Dowladda Oo La Hadlay Simba